Dagaal ka dhacay deegaanka Cabdalle Biroole oo lagu dilay dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Dagaal ka dhacay deegaanka Cabdalle Biroole oo lagu dilay dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab
Dagaal maanta ka dhacay deegaanka Cabdalle Biroole oo qiyaastii 34-km dhinaca galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka J/hoose ayaa la sheegayaa in lagu dilay illaa 4 nin oo ka tirsan dagaalyahanadda Al-shabaab.
Dagaalkaasi oo in muddo ah socday ayaa la sheegayaa inuu ku bilawday weerar ay ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Jubbaland ku qaadeen deegaanka Cabdalle Biroole, halkaas oo ay hore ugu sugnaayeen dagaalyahanada Al-shabaab.
Sarkaal ka tirsan ciidamada maamulka Jubbaland oo la hadlay warbaahinta Bulshoweyn ayaa u sheegay in weerar ay maanta ku qaadeen deegaanka Cabdalle Biroole ay suurto-gashay inay dilaan 4 ka mid ah Al-shabaab islamarkaana ay la wareegaan gacan ku haynta deegaankaas.
“Walaaloow dagaal ayaynu ku qaadnay deegaanka Cabdalle Biroole, waxaana dilnay 4 ka mid ah kuwa nabad-diidka ee Al-shabaab, waxaana kala wareegnay deegaanka iyo hub ay ka carareen” Sidaas waxaa yiri mid ka mid ah saraakiisha ciidanka maamulka Jubbaland oo aynu qadka telefoonka kula hadalnay.
Si kastaba ha ahaatee, dhowr jeer hore ayaa waxaa deegaanka Cabdalle Biroole ee gobolka J/hoose ku dagaalamay dagaalyahanadda Al-shabaab iyo ciidamo ka tirsan maamulka Jubbaland.